ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား3နှစ်ပေါင်း3months ago #488
လူအပေါင်းတို့ downloads, အချိန်ထွက်မှတ်ပုံတင်ပြီး။ အခမဲ့ downloads- အားလုံးအချိန်ကိုထုတ်။ ငါလကြာဘာမှကို download လုပ်ပါနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်!
ဒါဟာရယ်စရာ bleeping ပါ!
ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား3နှစ်ပေါင်း3months ago #489
ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား3နှစ်ပေါင်း3months ago #490
သင်သည်သင်၏ browser မှာ installed ကိုမဆို script ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအရာရှိပါသလား
ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား3နှစ်ပေါင်း3months ago #491
ကျွန်မလပေါင်းများစွာဘို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့။ ငါလေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများကိုဒဏ်ငွေများမှာ gee ခဲ့ရှေ့မှာ RIKOOOO ဆက်သွယ် attemptede ။ အထဲကအရာအားလုံးကြိမ်ငါဒေါင်းလုပ်အခမဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး downloads, နှစ်ဦးစလုံးရနိုင်မီ။
ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား3နှစ်ပေါင်း3months ago #492
ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ downloads ကို port 8080 အစား port 80 မှပေးသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ သင်၏ port 8080 ကိုသင်၏ firewall မှပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုအလွယ်ကူဆုံးသိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ Simviation.com မှတစ်ခုခု download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ simviation သည်သူတို့၏ downloads များအတွက် port တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုသောကြောင့် simviation နှင့် Rikoooo တို့နှင့်အဆင်မပြေပါကသင်၏ firewall သည် port 100 ကိုပိတ်ထားသည်။ သင်၏ firewall ထဲသို့စည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင် port 8080 TCP / UDP ကိုဖွင့်ရမည်။ ။
ထိုအခါတိုင်း download, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အလုပ်လုပ်မည်ကိုပင်များစွာသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာ။
ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလား2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #700
အခြားမည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ဤပြဿနာကိုသတင်းပေးပို့လိုလျှင်, default အဖို့၎င်းတို့၏ modem firewall settings များ reset သူတို့ကိုပြောပြပါ။ အကြှနျုပျ၏ပြဿနာမိမိကိုယ်ကိုရက်စက်မှုခဲ့သည်။